မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းသော induction သံမဏိဝါယာကြိုးအပူချိန်စက်
ပင်မစာမျက်နှာ / applications ကို / induction အပူ / induction သံမဏိဝါယာကြိုးအပူချိန်
induction သံမဏိဝါယာကြိုး tempering
အမျိုးအစား: induction အပူ Tags: induction tempering အပူပေးစက်ကိုဝယ်ကြလော့, induction အပူ tempering, သော induction ဒေါသကို, induction tempering အပူပေးစက်, induction tempering ဖြစ်စဉ်ကို, သော induction ဒေါသကိုမျက်နှာပြင်, သံမဏိဝါယာကြိုး tempering, မျက်နှာပြင်လည်, မျက်နှာပြင် tempering အပူပေးစက်, သမ, သော induction ပစ္စည်းကိရိယာများ tempering, tempering ဖြစ်စဉ်ကို, induction tempering ဝါယာကြိုး
သော induction ဒေါသကဘာလဲ?
induction tempering မာကျောပြီးဖြစ်သောမာကျောသောပစ္စည်းများအတွင်းတွင်မာကျောခြင်းနှင့်ကျုံ့ခြင်းကဲ့သို့သောစက်မှုဂုဏ်သတ္တိများကိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်သောအပူဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့်မားပြီးမြန်ဆန်သောပြောင်းလဲမှု၊ အကောင်းဆုံးဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသောစျေးနှုန်းများကိုသေချာစေသည်။
HLQ တရုတ်နိုင်ငံတွင် induction tempering အပါအ ၀ င်အပူကုသမှုဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကိုထောက်ပံ့ပေးသော induction အပူကုသသည့်လုပ်ငန်းတွင် ဦး ဆောင်သည်။ induction tempering သည် induction hardening process ပြီးသည်နှင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ပြုလုပ်သောအပူကုသခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ လိုချင်သောမာကျောမှုအတိုင်းအတာကိုရောက်ရှိရန် (သို့) ပျော့ပြောင်းခြင်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်အပိုင်း၏ခိုင်မာမှုကိုပေါင်းစပ်နိုင်ရန်အတွက်၎င်းကို induction hardening process ထက်နိမ့်သောအပူချိန်တွင်ပြုလုပ်သည်။ သံမဏိကို induction tempering လုပ်ခြင်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်နာရီအနည်းငယ်ကြာသောမီးဖိုလုပ်ခြင်းနှင့်ဆင်တူသောစက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းရလဒ်များကိုထုတ်လုပ်ရန်ကြိမ်နှုန်းနိမ့်ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
ထုတ်လုပ်မှုအမြန်နှုန်းတွင် induction coil မှတစ်ဆင့်ဝါယာကြိုးများကိုသိုမှီးထားသည့်စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် induction heat ကိုသုံးနိုင်သည်။
ပစ္စည်း: သံမဏိကြိုး 3mm မှ 12mm အချင်း
အပူချိန်: 1922 ºF (1050 ºC)
frequency: 90 kHz
Induction Heat Equipment: DW-UHF-60 kW၊ 100 kHz သော induction အပူ system ကို1.0 μFစုစုပေါင်းရှစ်2μF capacitors င်တစ် ဦး ဝေးလံခေါင်သီ workhead တပ်ဆင်ထားသည်
- ၀ န်ဆောင်မှုအကွာအဝေးကိုဖုံးလွှမ်းရန်အတွက်ဤလျှောက်လွှာအတွက်အထူးဒီဇိုင်းထုတ်။ တီထွင်ထားသော induction heat coils သုံးခု
Induction Tempering လုပ်ငန်းစဉ်
ကြိုးစတော့ရှယ်ယာကိုတစ်မိနစ်လျှင် ၆ မီတာနှုန်းဖြင့်အလေးဆယ်လှည့် helical ကွိုင်ဖြင့်ဖြတ်သန်းကာအပူချိန်သို့ရောက်အောင်အပူပေးသည်။ အလားတူအလှည့်6အလှည့် helical ကွိုင်အကြီးမားဆုံးဝါယာကြိုးအချင်းအတွက်အသုံးပြုသည်
သေးငယ်တဲ့အချင်း၏ဝါယာကြိုးသို့စိတ်ပျက်စရာအပူလွှဲပြောင်းနှင့်အတူတစ် ဦး gasfired မီးဖိုထဲသို့6စတော့ရှယ်ယာ feed ကို - လိုင်းများ၏လိုအပ်သောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု။ induction တွင်စွမ်းအင် ၅၀% လိုအပ်ပြီးထုတ်လုပ်မှုလမ်းကြောင်းကို ၉၀% လျှော့ချနိုင်သည်။
ရလဒ်များ / အကျိုးကျေးဇူးများ induction အပူ ထောက်ပံ့:
induction tempering ကိုကားစက်ရုံများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သုံးပြီးမျက်နှာပြင်ခိုင်မာစေသည့်အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သော shafts, bars နှင့် joints ။ ၎င်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြွန်နှင့်ပိုက်စက်မှုလုပ်ငန်းများမှတဆင့်ခိုင်မာအောင်ပြုလုပ်ထားသောပစ္စည်းများကိုမှေးမှိန်ရန်အသုံးပြုသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် induction tempering ကို hardening station တွင်ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။
အဘယ်ကြောင့်သော induction tempering သုံးပါ?
ကျွန်ုပ်တို့၏ induction tempering process သည်ရလဒ်များကိုလျင်မြန်စွာထုတ်ပေးသည်။ ခိုင်ခံ့သောသံမဏိများကိုအပူချိန်သည်အချိန်နှင့်အပူနှစ်မျိုးလုံး၏လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ Induction tempering သည်အပူချိန်တိုသော (များသောအားဖြင့်စက္ကန့်ပိုင်းသာ) နှင့်အပူချိန်မြင့်မားပြီးမကြာခဏနာရီများလိုအပ်သောမီးဖိုထားခြင်းဖြင့်ကုသမှုနှင့်ညီမျှသည်။ ခိုင်မာသည့်အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးအပေါ် induction tempering ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ရလဒ်သည်မာကျောမှု၊
၏အဓိကအားသာချက် သော induction ဒေါသကို မြန်နှုန်း Induction သည် workpieces များကိုမိနစ်ပိုင်းများ၊ တစ်ခါတစ်ရံစက္ကန့်ပိုင်းများတွင်ပင်လျော့နည်းစေသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်အရည်ကျိုမီးဖိုများလည်ပတ်ခြင်း ထို့အပြင် induction tempering သည် inline integration အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်လုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းများကိုအနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ induction tempering သည်တစ် ဦး ချင်းစီ၏အရည်အသွေးကိုထိန်းချုပ်သည်။ ပေါင်းစည်းသောသော induction ဒေါသအရှိန်များသည်လည်းတန်ဖိုးရှိသည့်ကြမ်းခင်းကိုသက်သာစေသည်။
မော်တော်ယာဉ်၏ induction အပူစမ်း
သော induction အပူဖိုက်ကာဗွန်
လူမီနီယမ်အနားကွပ် induction Preheating